Usoro Digital Digital Marketing maka 2014
Monday, July 28, 2014 Fraịde, Septemba 26, 2014 Douglas Karr
Mgbe ụfọdụ ọ na -adị mfe ịgbaso akara ntụpọ dịka ị na-achọ iji hụ na ahịa dijitalụ gị ziri ezi ma zuo ezu. Nke a infographic, otito nke Abụọ Legit, na-ezube ime nke ahụ. Na-eje ije gị site na a ụzọ ahịa nke ọnụnọ weebụ gị, mkpanaka, ecommerce, ọpụpụ, inbound, ọdịnaya na mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta.
Otu ihe dị na infographic a bụ ikike maka atụmatụ niile iji rụọ ọrụ na ibe ha. Dịka ọmụmaatụ, iji ahịa gị ọdịnaya na akwụkwọ akụkọ ike nke kachasị maka ngwaọrụ mkpanaka. Akọwapụtaghị nke a na infographic a mana ọ dị oke mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmachapụ email ma hụ na agụrụ ozi ịntanetị gị nke ọma. Edere m tupu oge a onye na-ahụ maka mgbasa ozi mgbasa ozi dijitalụ bụ nke onye nduzi, na-edozi oke nke usoro ọ bụla iji mee ụfọdụ egwu, ụtọ egwu!
Ọtụtụ mgbe karịa, anyị na-ahụ na isi ihe na-ere ahịa nke ọma na-adịghị eme ihe niile… ọ bụ guzozie a Nchikota nke azum, adịkwu mmetụta site n'ime ka ha na-arụ ọrụ ọnụ, na ịghọta otú nke ọ bụla atụmatụ na-ebute iji jirichaa pụta. Nke ahụ kwuru - nke a ka bụ nnukwu ndebanye iji gbadata ma hụ na ị gaghị efu ihe ọ bụla! Ihe omuma ihe a na-enyekwa otutu onu ogugu ahia dijitalụ.
Usoro Digital Digital Marketing 2014
Tags: content Marketingecommerceinboundụzọ ahịaMobile na Mbadamba ụrọọpụpụelekọta mmadụ mediaabụọ legitọnụnọ weebụ